बर्षालाई पाउन अनुप र प्रशान्तबीच भयानक टकराब, कसले मार्ला बाजी ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentबर्षालाई पाउन अनुप र प्रशान्तबीच भयानक टकराब, कसले मार्ला बाजी ? (भिडियो)
August 10, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
भदौ १ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘जय सम्भु’ को यतिबेला सर्वत्र चर्चा सुनिने गर्छ । मुख्यतया फिल्ममा अभिनय गरेका तीन पात्र अभिनेता प्रशान्त ताम्राकार, अनुपविक्रम शाही र अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीको कारण पनि यो फिल्मको चर्चा चुलिएको हो । फिल्ममा बर्षालाई पाउन अभिनेताद्वय अनुप र प्रशान्तको द्वन्द्व देखाउने प्रयास गरिएको छ । फिल्मको प्रमोशनका लागि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ताका लागि यी तिनै स्टार यतिबेला व्यस्त देखिन्छन् ।
एक अन्तरवार्तामा फिल्मका दुई प्रेमी पात्रसँग अभिनेत्री बर्षा पनि देखिएकी छिन् । उनले दुई पात्रको द्वन्द्वले फिल्ममा आफूलाई तनाव हुने समेत स्वीकार गरेकी छिन् । खलपात्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल प्रशान्लाई कुनै फिल्ममा आफूले नायकको रुपमा देख्न चाहेको समेत बर्षाले आशा व्यक्त गरिन् ।